Grenada eo ambanin'ny Lockdown feno: manatsara ny valiny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Grenada eo ambanin'ny Lockdown feno: manatsara ny valiny COVID-19
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Grenada Breaking News • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Hatramin'ny alahady 29 martsa 2020, ny nosy nosy Grenada dia nahitana tranga 9 voan'ny coronavirus COVID-19. Ny tranga rehetra dia tranga nafarana na nafarana. Manomboka amin'ny 25 martsa, ao anatin'ny fomba mavitrika hanakanana ny fielezan'ny fiarahamonina COVID-19, Grenada dia nanambara fa misy fepetra tsy ampoizina mandritra ny 21 andro. Teo ambanin'io fanambarana io dia avela handao ny tranony ny olona manomboka amin'ny 5 ora ka hatramin'ny 7 hariva mba hanao hetsika voatondro. Avy eo nanomboka ny 30 martsa 2020, ny firenena nosy dia nandalo fe-potoana naharitra 24 ora hanalefahana ny fiparitahan'ny fiaraha-monina COVID-19 nametraka an'i Grenada teo ambany fikatovana tanteraka.
Ny Governemantan'i Grenada dia nandray an-tanana ireo fepetra mihetsika mba hiarovana ny olom-pirenena sy ny mpitsidika ny nosy. Mihatra hatramin'ny 6 aprily 2020 ny fe-potoana tsy fahazoana mivezivezy amin'ny fotoana voalohany hamerenana izany.
Nanidy ny sisintaniny i Grenada nanomboka ny 22 martsa 2020 ary ny sidina mpandeha fotsiny hampody ireo mpitsidika any amin'ny firenena niaviany no nahazo alalana hiditra amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Maurice Bishop (MBIA). Faly ny firenena amin'ireo mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena izay nanampy tamin'ity fampiharana tsy mbola nisy toa azy ity.
Ny biraon'ny Grenada Tourism Authority (GTA) dia mikatona mandritra ny vanim-potoana voafetra manomboka amin'ny 6 hariva ny 25 martsa ka hatramin'ny 15 aprily 2020. Ny ekipa ao amin'ny GTA dia miasa lavitra ary afaka mifandray amin'ny finday miasa na mailaky ny orinasa.
Mbola matoky tena ihany i Grenada fa hahita fahombiazana amin'ny fomba fiarovana ny nosy ireo fepetra ireo. Miangavy ny tsirairay izy mba hanao ezaka iraisana hijanona ao an-trano sy hijanona ho azo antoka. Ny Governemantan'i Grenada dia hamerina hijery ny zava-misy amin'ny 15 aprily 2020 ary hanome fanavaozana ny fandaharam-potoana mba hitsidihana mpitsidika indray.
Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho ny pejy web an'ny Governemanta Grenada ao amin'ny www.mgovernance.net/moh/ na ny pejy Facebookn'ny Ministeran'ny Fahasalamana ao amin'ny Facebook / HealthGrenada.